Malunga nathi -kusasa ilitye Co., ltd.
Ilitye leNkwenkwezi yasekuseni
Ubuhle belitye lendalo lihlala likhupha ubukhazikhazi balo obungapheliyo kunye nomtsalane.
KwiKhwezi lasekuseni uyakuhlala unikwa ixabiso lokwenyani lamatye endalo.
Ilitye lokusa lasekwa kula matye ekona angaqhelekanga:
Ukuthanda ishishini lamatye endalo
Umgangatho yinto yokuqala engenakuze iphazamiseke
Inkonzo ngexesha nangokuchaneka
I-Innovation yinjini engapheliyo yeMorningstar ukuze iqhubeke ikhanya
Ukusuka ekukhetheni izinto zokwenza imveliso ngokuchanekileyo nangokuchanekileyo, sijolise ekutyhilweni kobuhle obungenakuthelekiswa nanto bohlobo ngalunye lwelitye lendalo ngomzamo omkhulu wokusebenza ngokubambisana kunye nokulahla inkunkuma ngokwezoqoqosho nangobuhle. Umqeshwa kwiMarblestar marble adibanise kwaye enze inkampani ephathekayo kunye neyobanzi.
Ikhwezi lokusa sele linikezelwe phantse ekuvelisweni kwamatye endalo. Inye nganye kwiKhwezi lokusa ifundiswe kakuhle ngokubaluleka kunye nokuhluka kobutyebi bendalo. Umgca wokuzenzela uphela uyilelwe kwaye wacingwa kakuhle phambi kwazo naziphi na iimveliso zesiko eziza kwenziwa. Sineqela lethu elikhuthazayo lokuthenga ngokuthenga ukunceda ekuqondeni uyilo loyilo olusuka kubaxumi bethu ukuya kwinqanaba elisebenzayo.
Ukusuka kowona msebenzi mncinci kuye kweyona projekthi inomdla, iMorningstar icwangcisiwe ukwanelisa ubuchwephesha, ubuhle kunye nolindelo lwezoqoqosho kubo bonke abathengi abaxhomekeke kwimisebenzi yethu enobukrelekrele kodwa enobuchule.
Ngeli xesha likhulu kakhulu ukuqokelelwa kwamava okusebenzela iiprojekthi eziphezulu. Izisombululo ezizodwa zifunwa kwicandelo lobunewunewu ukuze zifezekise impumelelo ngokutyhila ubuhle obunzima ukuqaphela ematyeni, Oku kufuna iqela lokuyila nelisebenzayo kunye namava abanzi kwiiprojekthi zemabhile kunye namatye endalo.
Inkonzo yokumisa ilitye